Politika cookie | ListaIPTVtelevision.com
Ny tranokalanay (manaraka izany: "ny tranokala") dia mampiasa cookies sy teknolojia hafa mifandraika amin'izany (ho fanamorana, antsoina hoe "cookies" ny teknolojia rehetra). Ny cookies koa dia napetraky ny antoko fahatelo nifandraika taminay. Amin'ity antontan-taratasy manaraka ity dia mampahafantatra anao momba ny fampiasana cookies amin'ny tranokalanay izahay.
Inona no atao hoe cookie?
Ny cookie dia rakitra kely alefa miaraka amin'ireo pejin'ity tranokala ity ary voatahirin'ny mpitety tranonkalanao ao amin'ny kapila mafy an'ny solosainao na fitaovana hafa. Ny fampahalalana voatahiry dia azo averina any amin'ireo mpizara anay na ireo mpizara antoko fahatelo mifanaraka amin'izany mandritra ny fitsidihana manaraka.
Inona no atao hoe script?
Ny script dia ampahany amin'ny kaody fandaharana ampiasaina mba hampandeha tsara ny tranokalanay sy hifaneraserana. Ity kaody ity dia mandeha amin'ny lohamilinay na amin'ny fitaovanao.
Inona no atao hoe fanilo web?
Ny fanilo web (na marika piksel) dia sombin-tsoratra na sary kely tsy hita maso amin'ny tranokala iray izay ampiasaina hanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny tranokala iray. Mba hanaovana izany, ny angona isan-karazany momba anao dia tehirizin'ireo fanilo web ireo.
Iza no mampiasa cookies?
Ny mpivarotra, anisan'izany i Google, dia mampiasa cookies hanehoana doka mifandraika amin'izany mifototra amin'ny fitsidihan'ny mpampiasa teo aloha ny tranokalany na tranokala hafa.
Ny fampiasana cookies amin'ny dokam-barotra dia ahafahan'i Google sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy mampiseho dokambarotra mifototra amin'ny fitsidihan'ny mpampiasa ny tranokalany na ny tranokala hafa amin'ny Internet.
Azonao atao ny miala amin'ny doka manokana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra ianao Preferansa doka. Na amin'ny www.filomads.info ho an'ny mpamatsy hafa, izay hotanisaintsika eto ambany.
Cookies ampiasaina amin'ity tranonkala ity
Cookies ara-teknika na azo ampiasaina
Ny cookies sasany dia miantoka fa mandeha tsara ny ampahany sasany amin'ny tranokala ary tadidio hatrany ny safidin'ny mpampiasa anao. Amin'ny fametrahana cookies azo ampiasaina, dia manamora kokoa ny fitsidihanay ny tranokalanay. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mampiditra fampahalalana mitovy foana ianao rehefa mitsidika ny tranokalanay ary, ohatra, mijanona ao anaty sarety fiantsenana ireo entana mandra-pandoanao. Azontsika apetraka ireto cookies ireto raha tsy mahazo alalana aminao.
Mampiasa cookies statistika izahay mba hanatsarana ny traikefa amin'ny Internet ho an'ny mpampiasa anay. Amin'ireo cookies statistika ireo dia mahazo fampahalalana momba ny fampiasana ny tranokalanay izahay. Mangataka alalana aminao izahay hametraka cookies statistika.
Amin'ity tranokala ity dia mampiasa cookies dokam-barotra izahay, izay mamela anay hanamboatra ny doka ho anao, ary izahay (sy ny antoko fahatelo) dia mahazo vaovao momba ny vokatry ny fampielezan-kevitra. Miankina amin'ny mombamomba iray noforoninay amin'ny kitihinao sy ny fitetezanao ao anatiny sy ivelan'ny tranonkala izany. Miaraka amin'ireo cookies ireo ianao, amin'ny maha-mpitsidika tranonkala anao, dia mifamatotra amin'ny ID tokana, ka tsy hahita doka mitovy mihoatra ny indray mandeha ianao, ohatra.
Cookies momba ny marketing/tracking
Ny cookies amin'ny marketing / tracking dia cookies, na endrika fitehirizana eo an-toerana hafa, ampiasaina hamoronana mombamomba ny mpampiasa hanehoana dokam-barotra na hanarahana ny mpampiasa amin'ity tranonkala ity na amin'ny tranokala maro samihafa ho an'ny tanjona ara-barotra mitovy amin'izany.
bokotra media sosialy
Ao amin'ny tranokalanay dia nampiditra bokotra ho an'ny Facebook, Twitter ary Pinterest izahay mba hampiroboroboana pejy (oh: "j'aime", "pin") na hizara azy ireo (oh "tweet") amin'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook, Twitter ary Pinterest. Ireo bokotra ireo dia miasa amin'ny fampiasana kaody avy amin'ny Facebook, Twitter, ary Pinterest. Ity code ity dia mampiditra cookies. Ireo bokotra amin'ny tambajotra sosialy ireo dia afaka mitahiry sy manodina vaovao sasany, amin'izany fomba izany dia azo aseho ny dokambarotra manokana.
Azafady, vakio ny politikan'ny tsiambaratelon'ireo tambajotra sosialy ireo (izay mety hiova matetika) mba hahitana izay ataon'izy ireo amin'ny angonao (manokana) izay karakarainy amin'ny fampiasana ireo cookies ireo. Tsy fantatra anarana araka izay azo atao ny angona azony. Facebook, Twitter ary Pinterest dia any Etazonia.
Manaraka ny torolàlana an'ny Sampan-draharahan'ny Espaniola momba ny fiarovana angon-drakitra Espaniola, dia manohy manadihady ny fampiasana ny Cookies Ataon'ity tranonkala ity mba hampahafantarana anao araka izay tratra azy.
Fanatsarana ny Google Ads
Mampiasa ny fanatsarana ny doka Google izahay hanehoana doka. hamaky bebe kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Politikan'ny tsiambaratelo Google Ads Optimization.
google_experiment_mod * 3 volana Mitahiry sy manara-maso fitsidihana manerana tranonkala maro
Mampiasa Google Ads amin'ny fanaovana doka izahay. hamaky bebe kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Politikan'ny tsiambaratelo Google Ads.
goog_pem_mod fikirizana Alefaso ny fandefasana doka na ny famerenanana indray
dokam-barotra / Ga-mpihaino Nada Tehirizo ny fampahalalana momba ny tanjon'ny marketing
Mampiasa ny Google Analytics izahay amin'ny statistikan'ny tranonkala. hamaky bebe kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Politikan'ny tsiambaratelo Google Analytics.
_ga 2 taona Manisa ary manara-maso ny fijerin'ny pejy
_gid 1 andro Manisa ary manara-maso ny fijerin'ny pejy
_gat_gtag_UA_ * 1 minitra Tehirizo ny karapanondro ho an'ny mpampiasa
Mampiasa Facebook izahay hanehoana ireo bokotra sosialy sy / na bokotra fizarana sosialy tato amin'ny media sosialy. hamaky bebe kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Politikan'ny fiainana manokana ao amin'ny Facebook.
_fbc 2 taona Tehirizo ny fitsidihana farany
fbm * Taona 1 Tehirizo ny antsipirian'ny kaonty
xs 3 volana Mitahiry kaonty ID tsy manam-paharoa
fr 3 volana Alefaso ny fandefasana doka na ny famerenanana indray
fihetsika Andro 90 Ataovy izay hidiran'ny mpampiasa
_fbp 3 volana Mitahiry sy manara-maso fitsidihana manerana tranonkala maro
datr 2 taona Omeo fisorohana hosoka
c_user Andro 30 Tehirizo ny karapanondro ho an'ny mpampiasa
sb 2 taona Tehirizo ny antsipirian'ny browser
* _fbm_ Taona 1 Tehirizo ny antsipirian'ny kaonty
Mampiasa Twitter izahay hanehoana ireo bokotra sosialy sy / na bokotra fizarana sosialy tato amin'ny media sosialy. hamaky bebe kokoa
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Politikan'ny tsiambaratelo Twitter.
local_storage_support_test fikirizana Ampiasao ny fampandanjana entana
metrics_token fikirizana Tehirizo raha toa ny mpampiasa nahita ny atiny tafiditra ao anatiny
google_adsense_settings fikirizana Manome dokam-barotra na retargeting.
__gady 13 volana Manome dokam-barotra na retargeting.
Famonoana na fanesorana cookies
Amin'ny fotoana rehetra, azonao atao ny mampiasa ny zonao hamono na hanafoana cookies avy amin'ity tranonkala ity. Ireo fihetsika ireo dia tanterahina amin'ny fomba hafa miankina amin'ny browser ampiasainao.
Rehefa mitsidika ny tranonkalantsika voalohany ianao dia hampiseho anao ny fikandrana mipoitra misy fanazavana momba ny cookies. Raha vantany vao tsindrio ny "Save preferences" dia manaiky ianao fa mampiasa ny sokajy cookies sy plugins izay nofidinao tao amin'ny varavarankely pop-up, araka ny voalaza ao amin'ity politika cookie ity. Azonao atao ny manafoana ny fampiasana cookies amin'ny alàlan'ny browser-nao, saingy tadidio fa mety hijanona tsy mandeha tsara intsony ny tranokalanay.
Ny fitahirizana na ny fidirana ara-teknika dia tena ilaina ho an'ny tanjona ara-dalàna amin'ny famelana ny fampiasana serivisy manokana nangatahan'ny mpanjifa na mpampiasa, na ho an'ny tanjona tokana hanatanterahana ny fampitana fifandraisana amin'ny alàlan'ny tambajotram-pifandraisana elektronika.
Fitehirizana na fidirana ara-teknika izay ampiasaina manokana ho an'ny tanjona statistika tsy fantatra anarana. Raha tsy misy fepetra, fanarahan-dalàna an-tsitrapo ataon'ny Mpanome tolotra Aterineto anao, na firaketana fanampiny avy amin'ny antoko fahatelo, dia tsy azo ampiasaina hamantarana anao ny fampahalalana voatahiry na nalaina ho an'ity tanjona ity fotsiny.
Ny fitahirizana na ny fidirana ara-teknika dia ilaina mba hamoronana mombamomba ny mpampiasa hanaterana dokam-barotra, na hanara-maso ny mpampiasa amin'ny tranokala iray na maromaro ho an'ny tanjona ara-barotra mitovy.
Azonao atao ny mampiasa ny Internet browser hamafana cookies anao ho azy na amin'ny tanana. Azonao atao ihany koa ny mamaritra fa misy cookies tsy azo apetraka. Safidy iray hafa ny fanovana ny fikirana ao amin'ny Internet-browser anao mba hahazoanao hafatra isaky ny apetraka ny cookie. Raha mila fampahalalana misimisy momba ireo safidy ireo dia jereo ny torolalana ao amin'ny fizarana "Vonjeo" ao amin'ny browser-nao.
Azafady azafady fa mety tsy mandeha tsara ny tranokalanay raha tsy mandeha ny cookies rehetra. Raha hofafanao amin'ny tranokalanao ny cookies, hapetraka indray izy ireo aorian'ny fanekenao rehefa mitsidika ny tranokalanay indray ianao.
Mpanome doka mahazatra an'ny Google mpiara-miasa aminay
24.ai (mpandimby ny EngageClick)
Doka an-tapitrisany voafetra
Ampifanaraho ny varotra - Sehatra fanaovana doka
Ampifanaraho ny GmbH
Ny sandan'ny anjara AdLib Digital Limited
mandroso STORE GmbH *
Amp.ai amin'ny alàlan'ny tsikombakomban'ny scaled
Bam! Marketing marketing iraisana GmbH
faneva mikoriana *
Batch Salan'isa *
Ny sandan'ny anjara Bauhof Group AS
Baniera tsara kokoa
Hatsikana amin'ny oniversite
Acting Commandants *
Afo ny atiny
Exchange Publisher Czech zspo
Voafetra ny DAPP GLOBAL
DAX avy amin'ny Global
Ny sandan'ny anjara Demand Side Science, Inc.
Tambajotra Dentsu Aegis *
Ny sandan'ny anjara DynAdmic Corporation
MORA Marketing GmbH
EASY media *
mpanao trano *
Ny sandan'ny anjara ENVISIONX LTD
Marketing amin'ny eyereturn
[email voaaro] fifandraisana
Famandrihana haingana SAS
resaka tselatra *
Haino aman-jery tapaka *
FUSIO nataon'i S4M *
GP Voalohany *
Masinina vita amin'ny olombelona vita
Hatsarao ny dizitaly *
Exchange Exchange *
Doka eo noho eo
Siansa momba ny doka rehetra *
Fiarovana amin'ny Internet IronNet
Isobar Republic Czech
Dia nataon'i CAKE
mitarika fiaraha-miasa GmbH
LendGo & Metrics vaovao
betsaka aho *
Vondrona Macromill *
Ny orinasa Marketing Science Consulting Group, Inc. *
Fikarohana MindTake *
Tambajotra Affiliate Mixmarket
izao tontolo izao modellbau GbR
Doka Moloco *
MoPub (fizarana iray amin'ny Twitter, Inc.)
Ink azo ovaina
Teo akaikin'ny Pte Ltd
Vondrona Neodata *
fitadiavana net *
Haavo manaraka - Marketing marketing
Mpiara-miasa tanjona *
Vondrona Media Omnicom *
Amin'ny fikarohana momba ny fitaovana *
Hiala amin'ny dokam-barotra
Ny orinasa Outbrain Inc.
NANOMBOKA TEO *
PML haino aman-jery vaovao
Media voaaro *
Pulpo (Orinasa entravision)
Media madio eto an-toerana GmbH
Vakio ny tampon'ny
Vondrona Reas Travel
Raiso an-tanana JP
Avereno resahana ny dizitaly
Haino aman-jery Resolution *
teny mafonja io *
Retube Video mifandraika
Fikarohana Roy Morgan
Trano RTB *
SAS Planet Iray Ihany
Shift Media *
Data momba ny signal
Teknolojia atody volafotsy
Vondron'ny serivisy data Silverbullet
Tsiky no tadiavina
Ny sandan'ny anjara SOL Networks Limited
Source Source: fahalalana
Vondrona Spring Venture
Ny votoatin'ny SUNT
TACTIC ™ Marketing amin'ny fotoana tena izy *
fanafenana ny marina
Ny orinasa MediaGrid Inc.
Ny vondrona Reach
Ny birao momba ny varotra *
Ilay Vondrona Tena
Ny orinasa TheINDUSTRY AG
mpijery fitsangatsanganana - Orinasa Amadeus *
True Wave Technologies voafetra
Ny sandan'ny anjara Umeng Plus Beijing Technology Limited
Tsy voafehyX *
Saina virtoaly *
tombony amin'ny tranonkala
web rama *
malalaka malalaka *
世 纪富轩 科技 发展 (北京) 有限公司
Ianao manana ireto zony manaraka ireto raha ny amin'ny angona anao manokana:
Manan-jo hahafantatra ny antony ilana ny angon-drakitrao manokana ianao, izay hanjo azy io sy ny hafiriana hitahirizana azy.
Zon'ny fidirana: zonao ny miditra amin'ny angon-drakitra manokana fantatray.
Zon'ny fanitsiana: zonao ny mameno, manitsy, mamafa na manakana ny angona anao manokana isaky ny maniry ianao.
Raha omenao anay ny fanekena hanodinana ny angon-drakitrao dia manan-jo hanafoana izany fanekena izany ianao ary hamafa ny angona anao manokana.
Zo hamindra ny angon-drakitrao: manan-jo hangataka ny angon-drakitrao manokana avy amin'ilay tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana ianao ary hamindra azy ireo amin'ny olona iray hafa tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana.
Zon'ny fanoherana: azonao atao ny manohitra ny fanodinana ny angon-drakitrao. Manaraka an'io izahay, raha tsy hoe misy antony matotra fanodinana.
Raha te hampiasa ireo zony ireo dia mifandraisa aminay. Azafady mba jereo ny antsipiriany momba ny fifandraisana eo ambanin'ity politika cookie ity. Raha manana fitarainana momba ny fomba fitantananay ny angon-drakitrao izahay, tianay hampahafantarinao anay, fa zonao koa ny mandefa fitoriana amin'ny manampahefana mpanara-maso (fahefana fiarovana data)
Na ity tranokala ity na ireo solontenany ara-dalàna dia samy tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny fahamarinan'ny politika momba ny tsiambaratelo mety hananan'ny antoko fahatelo voalaza ao amin'ity politika manokana ity. Cookies.
Ireo mpizaha tranonkala no fitaovana miandraikitra ny fitehirizana ny Cookies ary amin'ity toerana ity dia tsy maintsy ampiasanao ny zonao hanafoana na hanafoanana azy ireo. Na ity tranokala ity na ireo solontenany ara-dalàna dia tsy afaka miantoka ny fikirakirana marina na diso ny Cookies avy amin'ireo mpitety tranonkala voalaza etsy ambony.
Amin'ny tranga sasany dia ilaina ny mametraka Cookies mba tsy hanadino ny fanapaha-kevitra tsy hanaiky azy ireo ny browser.
Ho an'ny Cookies avy amin'ny Google Analytics, ity orinasa ity dia mitahiry ny Cookies amin'ny lohamilina any Etazonia ary manao izay tsy hizarana izany amin'ny antoko fahatelo, afa-tsy amin'ny tranga ilaina amin'ny fiasan'ny rafitra na rehefa takian'ny lalàna mba hanaovana izany. Araka ny Google dia tsy mahavonjy ny adiresy IP anao izany. Google Inc. dia orinasa iray nifikitra tamin'ny fifanarahana Safe Harbor izay manome antoka fa ny angon-drakitra nafindra rehetra dia hohajaina amin'ny ambina fiarovana arakaraka ny fitsipika eropeana. Azonao atao ny manatona fampahalalana amin'ny antsipiriany momba an'io ity rohy. Raha mila fampahalalana momba ny fampiasana omen'i Google cookies ianao ampifandraisinay ity rohy hafa ity.
Raha misy fanontaniana na fangatahana momba an'io politika io Cookies aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny sehatry ny fifandraisana.